စီးပွားဖြစ်ချဉ်ပေါင်စိုက်ကြမယ် – Blue Sea
blueseaskt | August 13, 2019 | Education | No Comments
အိန္ဒိယနိုင်ငံ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့တွင် စတင်ပေါက်ရောက်ခဲ့သည်ဟု ယူဆရသည်။
မြန်မာအမည် – ချဉ်ပေါင်
အင်္ဂလိပ်အမည် – ROSELLE
ရုက္ခဗေဒအမည် – Hibiscus sabdariffa
မျိုးရင်းအမည် – MALVACEAE
မြန်မာပြည်တွင် ချဉ်ပေါင်အမျိုးအစား (၃) မျိုးခန့် တွေ့ရှိရသည်။ စိုက်ပျိုးမှုများသောမျိုးများမှာ –
အိန္ဒိယမှရသော မျိုးဖြစ်သောကြောင့် ဘိလပ်ချဉ်ပေါင် (သို့) ကုလားချဉ်ပေါင်ဟုလည်း ခေါ်သည်။ အသီးမှာ နီရဲသောအသွေးရှိသဖြင့် ချဉ်ပေါင်နီဟုလည်း ခေါ်ကြသည်။
မြန်မာချဉ်ပေါင်သည် အရွက်ဝိုင်းသည်။ အပင်အရပ်မှာ နိမ့်ပြီး အကိုင်းအနည်းငယ်ဖြာသည်။ ၎င်းကို အရွက်စား သုံးရန် အဓိကရည်ရွယ်စိုက်ပျိုးကြသည်။
ကိုင်းဖြာမှုမရှိပဲ တစ်ပင်တိုင်မျိုးဖြစ်၍ လျှော်ထုတ်ရန် အသုံးပြုကြသဖြင့် လျှော်ချဉ်ပေါင်ဟုလည်း ခေါ်ကြသည်။ အရွက်မှာ လက်ခြားဖြာပြီး အမွှေးအနည်းငယ်ထူသည်။
၃။ စိုက်ပျိုးသည့် ဒေသ
အလွန်အေးသော အရပ်မှလွဲပြီး ချဉ်ပေါင်ကို မြန်မာပြည်အနှံ့အပြား စိုက်ပျိုးကြသည်။
ချဉ်ပေါင်သည် ဆားပေါက်သည့် မြေမှလွဲ၍ ရေစီးရေလာကောင်းသော မြေမျိုးတွင် များစွာစိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်းသည်။ မြေဆီဩဇာထက်သန်သော နုန်းပါသည့် ကိုင်းမြေများတွင် ပိုမိုဖြစ်ထွန်းသည်။
ချဉ်ပေါင်ပင် ဖြစ်ထွန်းချိန်တွင် မိုးဖွဲဖွဲရွာပါက ပိုမိုဖြစ်ထွန်း၏။ မိုးများလွန်းပြီး ရေဝပ်သောဒေသတွင် ချဉ်ပေါင်မဖြစ်ထွန်းပေ။ ဆောင်းရာသီတွင်လည်း ချဉ်ပေါင်ကို ရေပေးစိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ ထယ် (၁) စပ် ထိုးပြီး နောက်၊ ထွန် (၆-၈) စပ်အထိ ထွန်ရေးကောင်းသည့်တိုင် ထွန်ရသည်။ ကြမ်းတုံးရိုက်ပြီးနောက် စိုက်ကြောင်းများ ဆွဲ၍ တစ်တန်းနှင့်တစ်တန်း (၃) ပေ ခြားရမည်။
နွားချေးလှည်း (၁၀-၁၅)စီး၊ ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ တစ်ဧကလျှင် (၂၂၄) ပေါင်၊ တီစူပါ (၅၆) ပေါင်နှင့် ပိုတက်ရ်ှမြေဩဇာ (၅၆) ပေါင် ထည့်ပေးရမည်။ နွားချေးမြေဩဇာနှင့် ဓာတ်မြေဩဇာများကို ထည့်ပေးရာတွင် မြေကြီးတွင် သမစေရန် ထွန်ယက်ပေးရမည်။
ရာသီမရွေး စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ တစ်တန်းနှင့်တစ်တန်း (၃) ပေအကွာ ကြောင်းဆွဲထားသော စိုက်ကွက် (သို့) စိုက်ဘောင်တွင် ချဉ်ပေါင်မျိုးစေ့များ ဖြူးထည့်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ အစေ့များမှ စိုက်ပြီး (၃-၅) ရက်တွင် အပင်ပေါက်လာမည်။
ချဉ်ပေါင်တစ်ဧကစိုက်လျှင် မျိုးစေ့တစ်ပြည်နှုန်း လိုအပ်ပါသည်။ အလျားပေ (၂၀)၊ အနံ (၄) ပေ စိုက်ဘောင် တစ်ပေါင်အတွက် မျိုးစေ့ နို့ဆီဗူး (၁) ဗူးခန့်လိုအပ်ပါမည်။
မိုးတွင်းစိုက်ပါက မိုးရေရနေသဖြင့် ရေသွင်းရန် မလိုအပ်သော်လည်း ဆောင်းစိုက်အတွက် ရေသွင်းပေးရမည်။ မြေအခြေနေအရ (၂-၃) ကြိမ်အထိ ရေသွင်းပေးရန် လိုသည်။
မျိုးစေ့ဖြူးပြီးနောက် (၃-၅) ရက်ကြာလျှင် အပင်ကလေးများ ပေါက်လာမည်။ အရွက် (၃-၄) ရွက်ထွက်လာလျှင် တစ်ပင်နှင့်တစ်ပင် တစ်ပေခွာထား၍ ကျန်အပင်များ မှုန်းပေးပါ။ အတန်းကြားရှိ ပေါင်းများကို ကြားထွန်လိုက်၍ နှိမ်ပေးပြီး အပင်ခြေရင်းပေါင်းကို လက်ပေါင်းလိုက်ပေးပါ။ ကြားထွန်ကို ပေါင်းအခြေအနေအရ (၃-၄) ကြိမ် လိုက်ပေးရပါမည်။
စိုက်ပြီးနောက် (၄၅-၆၀) ရက် ကြာလျှင် အရွက်များစတင်ဆွတ်ခူးနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ အပင်လိုက်နှုတ်ပြီး အမြစ်ပိုင်း ဖြတ်ကာ ရောင်းချနိုင်သည်။ တစ်ဧကလျှင် ချဉ်ပေါင်အရွက်အစို ပိဿာ (၅၀၀-၁၀၀၀) အထိထွက်နိုင်သည်။
မျိုးထုတ်ရန် ချဉ်ပေါင်များကို အသီးရင့်သည်အထိ ထားရမည်။ ရင့်သောအခါ အသီးများညှိုးလာသည်။ ညှိုးရာမှ ခြောက်လာပြီး အသီးများကွဲလာကာ အစေ့များထွက်လာသည်။ မကွဲအာမီ အသီးပါသောအပိုင်းကို တံစဉ်ဖြင့်ဖြတ်တောက်၍ နေလှန်းပါ။ ကောင်းစွာခြောက်သွေ့သောအခါ အသီးများကို တုတ်ဖြင့်ရိုက်ပုတ်ပြီး အစေ့များယူပါ။
ချဉ်ပေါင်သည် မြန်မာလူမျိုးတို့၏ ကြိုက်နှစ်သက်သော အရွက်တစ်မျိုးဖြစ်သဖြင့် ဈေးတွင် ရောင်းရ တွင်ကျယ် သော ဟင်းရွက်ဖြစ်သည်။
(၁) ချဉ်ပေါင်စိုက်ခင်းကို ရေပေးရာတွင် ရေပေးမလွန်ရန် လိုအပ်သည်။ ရေပေးလွန်ပါက အရွက်များဝါပြီး အပင်ကျသွား၏။
(၂) မြေဩဇာကျွေးရာတွင်လည်း လိုအပ်သည်ထက်ပိုမကျွေးရန်လိုသည်။ မြေဩဇာအကျွေးများပါက အပင်နာပြီးသေနိုင်၏။
(၃) ချဉ်ပေါင်ပင်များကို ငယ်စဉ် မှုန်းပေးရန်လိုသည်။ သို့မှသာ ချဉ်ပေါင်ပင်များ ကြီးထွား သန်မာစေမည် ဖြစ်သည်။
ကိုးကား – စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
အိန်ဒိယနိုငျငံ နှငျ့ မွနျမာနိုငျငံတို့တှငျ စတငျပေါကျရောကျခဲ့သညျဟု ယူဆရသညျ။
မွနျမာအမညျ – ခဉျြပေါငျ
အင်ျဂလိပျအမညျ – ROSELLE
ရုက်ခဗဒေအမညျ – Hibiscus sabdariffa
မြိုးရငျးအမညျ – MALVACEAE
မွနျမာပွညျတှငျ ခဉျြပေါငျအမြိုးအစား (၃) မြိုးခနျ့ တှရှေိ့ရသညျ။ စိုကျပြိုးမှုမြားသောမြိုးမြားမှာ –
အိန်ဒိယမှရသော မြိုးဖွဈသောကွောငျ့ ဘိလပျခဉျြပေါငျ (သို့) ကုလားခဉျြပေါငျဟုလညျး ချေါသညျ။ အသီးမှာ နီရဲသောအသှေးရှိသဖွငျ့ ခဉျြပေါငျနီဟုလညျး ချေါကွသညျ။
မွနျမာခဉျြပေါငျသညျ အရှကျဝိုငျးသညျ။ အပငျအရပျမှာ နိမျ့ပွီး အကိုငျးအနညျးငယျဖွာသညျ။ ၎င်းငျးကို အရှကျစား သုံးရနျ အဓိကရညျရှယျစိုကျပြိုးကွသညျ။
ကိုငျးဖွာမှုမရှိပဲ တဈပငျတိုငျမြိုးဖွဈ၍ လြှျောထုတျရနျ အသုံးပွုကွသဖွငျ့ လြှျောခဉျြပေါငျဟုလညျး ချေါကွသညျ။ အရှကျမှာ လကျခွားဖွာပွီး အမှေးအနညျးငယျထူသညျ။
၃။ စိုကျပြိုးသညျ့ ဒသေ
အလှနျအေးသော အရပျမှလှဲပွီး ခဉျြပေါငျကို မွနျမာပွညျအနှံ့အပွား စိုကျပြိုးကွသညျ။
ခဉျြပေါငျသညျ ဆားပေါကျသညျ့ မွမှေလှဲ၍ ရစေီးရလောကောငျးသော မွမြေိုးတှငျ မြားစှာစိုကျပြိုးဖွဈထှနျးသညျ။ မွဆေီဩဇာထကျသနျသော နုနျးပါသညျ့ ကိုငျးမွမြေားတှငျ ပိုမိုဖွဈထှနျးသညျ။
ခဉျြပေါငျပငျ ဖွဈထှနျးခြိနျတှငျ မိုးဖှဲဖှဲရှာပါက ပိုမိုဖွဈထှနျး၏။ မိုးမြားလှနျးပွီး ရဝေပျသောဒသေတှငျ ခဉျြပေါငျမဖွဈထှနျးပေ။ ဆောငျးရာသီတှငျလညျး ခဉျြပေါငျကို ရပေေးစိုကျပြိုးနိုငျသညျ။ ထယျ (၁) စပျ ထိုးပွီး နောကျ၊ ထှနျ (၆-၈) စပျအထိ ထှနျရေးကောငျးသညျ့တိုငျ ထှနျရသညျ။ ကွမျးတုံးရိုကျပွီးနောကျ စိုကျကွောငျးမြား ဆှဲ၍ တဈတနျးနှငျ့တဈတနျး (၃) ပေ ခွားရမညျ။
နှားခြေးလှညျး (၁၀-၁၅)စီး၊ ယူရီးယားဓာတျမွဩေဇာ တဈဧကလြှငျ (၂၂၄) ပေါငျ၊ တီစူပါ (၅၆) ပေါငျနှငျ့ ပိုတကျရျှမွဩေဇာ (၅၆) ပေါငျ ထညျ့ပေးရမညျ။ နှားခြေးမွဩေဇာနှငျ့ ဓာတျမွဩေဇာမြားကို ထညျ့ပေးရာတှငျ မွကွေီးတှငျ သမစရေနျ ထှနျယကျပေးရမညျ။
ရာသီမရှေး စိုကျပြိုးနိုငျသညျ။ တဈတနျးနှငျ့တဈတနျး (၃) ပအေကှာ ကွောငျးဆှဲထားသော စိုကျကှကျ (သို့) စိုကျဘောငျတှငျ ခဉျြပေါငျမြိုးစမြေ့ား ဖွူးထညျ့ပေးရနျဖွဈပါသညျ။ အစမြေ့ားမှ စိုကျပွီး (၃-၅) ရကျတှငျ အပငျပေါကျလာမညျ။
ခဉျြပေါငျတဈဧကစိုကျလြှငျ မြိုးစတေ့ဈပွညျနှုနျး လိုအပျပါသညျ။ အလြားပေ (၂၀)၊ အနံ (၄) ပေ စိုကျဘောငျ တဈပေါငျအတှကျ မြိုးစေ့ နို့ဆီဗူး (၁) ဗူးခနျ့လိုအပျပါမညျ။
မိုးတှငျးစိုကျပါက မိုးရရေနသေဖွငျ့ ရသှေငျးရနျ မလိုအပျသျောလညျး ဆောငျးစိုကျအတှကျ ရသှေငျးပေးရမညျ။ မွအေခွနေအေရ (၂-၃) ကွိမျအထိ ရသှေငျးပေးရနျ လိုသညျ။
မြိုးစဖွေူ့းပွီးနောကျ (၃-၅) ရကျကွာလြှငျ အပငျကလေးမြား ပေါကျလာမညျ။ အရှကျ (၃-၄) ရှကျထှကျလာလြှငျ တဈပငျနှငျ့တဈပငျ တဈပခှောထား၍ ကနျြအပငျမြား မှုနျးပေးပါ။ အတနျးကွားရှိ ပေါငျးမြားကို ကွားထှနျလိုကျ၍ နှိမျပေးပွီး အပငျခွရေငျးပေါငျးကို လကျပေါငျးလိုကျပေးပါ။ ကွားထှနျကို ပေါငျးအခွအေနအေရ (၃-၄) ကွိမျ လိုကျပေးရပါမညျ။
စိုကျပွီးနောကျ (၄၅-၆၀) ရကျ ကွာလြှငျ အရှကျမြားစတငျဆှတျခူးနိုငျပွီဖွဈသညျ။ အပငျလိုကျနှုတျပွီး အမွဈပိုငျး ဖွတျကာ ရောငျးခနြိုငျသညျ။ တဈဧကလြှငျ ခဉျြပေါငျအရှကျအစို ပိဿာ (၅၀၀-၁၀၀၀) အထိထှကျနိုငျသညျ။
မြိုးထုတျရနျ ခဉျြပေါငျမြားကို အသီးရငျ့သညျအထိ ထားရမညျ။ ရငျ့သောအခါ အသီးမြားညှိုးလာသညျ။ ညှိုးရာမှ ခွောကျလာပွီး အသီးမြားကှဲလာကာ အစမြေ့ားထှကျလာသညျ။ မကှဲအာမီ အသီးပါသောအပိုငျးကို တံစဉျဖွငျ့ဖွတျတောကျ၍ နလှေနျးပါ။ ကောငျးစှာခွောကျသှသေ့ောအခါ အသီးမြားကို တုတျဖွငျ့ရိုကျပုတျပွီး အစမြေ့ားယူပါ။
ခဉျြပေါငျသညျ မွနျမာလူမြိုးတို့၏ ကွိုကျနှဈသကျသော အရှကျတဈမြိုးဖွဈသဖွငျ့ ဈေးတှငျ ရောငျးရ တှငျကယျြ သော ဟငျးရှကျဖွဈသညျ။
(၁) ခဉျြပေါငျစိုကျခငျးကို ရပေေးရာတှငျ ရပေေးမလှနျရနျ လိုအပျသညျ။ ရပေေးလှနျပါက အရှကျမြားဝါပွီး အပငျကသြှား၏။
(၂) မွဩေဇာကြှေးရာတှငျလညျး လိုအပျသညျထကျပိုမကြှေးရနျလိုသညျ။ မွဩေဇာအကြှေးမြားပါက အပငျနာပွီးသနေိုငျ၏။
(၃) ခဉျြပေါငျပငျမြားကို ငယျစဉျ မှုနျးပေးရနျလိုသညျ။ သို့မှသာ ခဉျြပေါငျပငျမြား ကွီးထှား သနျမာစမေညျ ဖွဈသညျ။
ကိုးကား – စိုကျပြိုးရေးဦးစီးဌာန
1. original region
Is believed to have been started in India and Burma.
English name – ROSELLE
Botanical name – Hibiscus sabdariffa
Name of species – MALVACEAE
Burma found in sour (3 pounds). Cultivation of many types –
(1) pound of sour red
India aerated sour because it calledapound or one pound of sour. The fruit fermented by the red blood pressure known.
(£ 2) and sour
The round leaves sour pounds. Herbs, plants andafew lower branches analysis. It leaves are grown mainly intended for use.
(3) separated sour pounds
Export wash without branching analysis for single use are called washable sour pounds. The leaves some fragrant and other analysis.
3. The cultivation area
Except in very cold places, sour pounds are grown extensively throughout the country.
The pound sour salt and ground water, except for the planting of such land productive. Sinking soil fertility than the forecast is more productive in the field.
While sour pounds productive Showers and more productive. The rain resulted inavery quiet area sour pounds. Winter can also grow sour pounds. Knitted plows (1) Plow (6-8) even furrow plow. After blocks of coarse plant withadraw. (3) must be separated.
6. How to feed manure
Lady (10-15), the cart Urea fertilizer တဈဧကလြှငျ (224 pounds) Super (56 pounds) and the cache must add manure (56) pounds. Lady manure and chemical fertilizer used to temperate soil must be plowed.
Select the season can be planted. And (3)aplant or plant spacing hang it in the frame Add sour seeds Distributor pounds. (3-5) on the plant from the seeds grow.
Sour pounds per acre planted seed rate ofacountry is required. အလြားပေ (20), (4) feet wide planted seeds for pound frame may need to pack condensed milk cans (1).
8. How to install water
Rain showers planted, though they do not need to be planted in winter. According to the status of water (up to 2-3 times).
9. Plants care
After Seed Distributor (3-5) days, the children will grow. (3-4), even if it leaves out the leaves andaseparate set of the remaining plants thinned. Plowarow between the compounds between the offset and the base of the plant after all. Under the circumstances, the tractor must (3-4) times.
10. How to win
(45-60) days after the plant leaves begin can be won. Plants can be sold via verbal root. တဈဧကလြှငျ wet leaves sour pounds pounds (500-1000).
Print untilapound of sour fruit. When the mature fruit thereof. Six finger, and sowing the seeds out of the fruit. Before half of the fruit section. Sickle, cutting and drying. Beat well with the stick when dry fruit and seeds.
Sour pounds မွနျမာလူမြိုးတို့၏ kind of leaves you like to be sold on the market onalarge vegetable.
13. Important factors
(1 pound) sour plantations need to pass water. After water of the falling leaves.
(2) no more than necessary to also feed manure need to be fed. Plants and fed manure.
(3 pounds) sour childhood needs to be thinned. Even so sour pound will grow stronger.
References – Department of Agriculture
တက္ကသိုလ်ပညာ မြန်မာလိုသင်ပါမှ “ဘွဲ့ရပညာမတတ်” ဇာတ်လမ်းဆုံးမည်
တ​နေ့ကို ၆မိနစ်​​လောက်​ သင့်​စိတ်​ကို အချိန်​​ပေးပါ